Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah_ Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah_ Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!
Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah_ Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!
Feb 05, 2017ARRIMAHA BULSHADA, WARAR
6)LA IMAAW KALSOONI DHAB AH
Kalsoonidu waa rumeysnaanta aad aminsantahay inaad si sax ah wax u qaban kartid ama aad xaalad ula tacaali kartid. Hadaba Intee katimadaa kalsoonidu? Haddii aad tahay qof bilaa kalsooni ah waxaad lumin doontaa fursado badan oo aad heli karto, Waayo waxaad kabaqan doonta inaad ku dhacdo waxaadan hubin inaad sameyn karto iyo inkale.
Kalsoonidu ma ahan wax lala dhasho balse waa wax leesbaro, marnaba ha iska dhaadhicinin inaad kadhaxashay kalsooni darada waalidkaada.
Kalsoonidu ma ahan dabeecad guud waayo waxaad leedahay dabeecado kala duwan kaas oo ku hareereesan howlaha kala duwan ee aad qabaneeso.
Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inad ku kalsoon tahay awood aad gaari ku wadi kartid, balse aad ka cabsato inad dad soo hor istaagto oo ad hadal u soo jeedinweeyso.
Kalsoonida ma ahan mid joogto ah mar wey xumaataa marna weey wanaagsantahay iyadoo mar walbo ku xiran xaaladda aad ku sugantahay.
Dunidaa waxaa mar walbo kusii badanaayo kalsooni darrada iyadoo dadka qaarkood ku yaraatay is aminadi. Sidaan ognahay Kalsoonida waa waxa kaliyah ee nolosha bini aadamka kutaaagantahay haddana ku yar.
waxaad lakulmeysaa caqabado kala duwan .
kalsoonida wexey keenta nolol mustaqbal leh iyo isku xirnaasho dadka aad xariirka laleedahay.
Kalsoonida waa midda kaliya ee sidii shumaca loo iftiin sado.Sidaa marxalada mugdigii aad kujirtay uu kaaga saaro kadibna si aad iftiin u hesho. Balse kalsoonida kaligeed iska matimaado, lakiin wexey ubaahan tahay ruux iftiimiyo qalbigiisa wanaagsan nafsadiisana ku kalsoon, xumaantana dadka ka qadan, naftiisana xakameeyo . Sidaan oganahay kalsoonidarrada waxaa keeno hubsiimo la’aanta, Isku day inaad wax walbo hubsato oo aadan go’ aanka ku dagdagin. Kalsoonida sida looburburiyo waa ay sahlan tahay laakiin waxaa adag sidii dib loogu soo celiyo.
7)Maxaa kadhigay dadka qaar in ey nolosha guul ka gaaraan ?
Waxaad arkeysaa iney dadka ku noolyihiin murugo iyo walbahaar iyo waliba wax soo saar la’aan. Maxay uga duwan yihin dadka guusha gaaray dadka guuldarestay?
Waxey uga duwan yihiin wax qabad wanaagsan oo ay sameyaan islamarkaana waxey ku celceliyan in ay joogteeyaan xilliba xilliga kadambeeya.Haddaba manahay dad sameyn kara wixii ay sameyeen dadkaasi?
Haa, waan sameyn karnaa hadii aan la’imaano kalsooni dhab ah, waayo waxba nama dhaamaan oo waxeynu ku wada dhalanay bilooyin isku mid ah, siidaas ay tahay hadda lataganyahay inaga ayaa ka waqti fiican.
Waxaa laga yabaa iney ku noolaayeen nolol aad uxun ama aysan heli Karin waqti ku haboon oo ay uga faa’iideystan fursadda qaaliga ah. Si aad ugaartid nolosha aad tiigsaneysid raac wadooyin kaan:
Seexo xili horay habenkii soona kac aroorti horey.
wax aqri imbadan si aad wax badan ufahantid
soo dhawey guul darrada.
wax ka eeg dhinaca wanagsan
noqo qof wax badan baaro
Sii waqtigaada qeeb kamid ah dadka ku taagersan iyo kuwaanku tageer saneen si aad uga hesho figrado kale duwan.
Run ahantii waa wax la tijaabiyay oona lagu guulestay waxana la ogaday iney kasiman yihiin arinkaa dhamaan dadka guuleystayaasha.
Sidaan lasoconno dadka aduunka magaca ku reebay noloshooda waxey uga faa’iideysteen qodobadaaan kor ku soo xusnay. Ugu dambeen noloshaada usamey nidaam ama jadwal.
Dhamaan qof walbo oo jecel inuu guu leesto wax uu bilaawo wu dhameyaa lakiin waxa jiro dadka qaar jecel iney guuleystaan haddana waxa ey bilawen ma dhameyaan.Tusaale ahaan waxaad bilawday wax barasho adigoon dhamestirin ayaad ku guul daresatay kadibna iskaga tagtay.Sidas dareeded looma baahno inaad dhex uga tagtid waxaad bilawdid si aad uga guleysatit hadafkaaga. Ugu dambeen haka daalin inaad wax badan barto wax badan aqriso wax bada dhageysato.
W/Q:-Ifraax Maxamed Cali markale lasoco qaybaha kale
Previous PostCali Khaliif Galeyr oo goor dhow gaaray magaalada Hargeysa, dayuuradna ka raacay!! Next PostDaawo Muuqaal:Diyaarad qaadi lahayd Cali Khaliif Gallaydh oo Buhoodle lagu xanibay!